Kuchengeta tsika yavo iri mhenyu yekumisikidza giraidhi nyowani makore ese maviri, gore rino, NVIDIA inosuma iyo Ampere GPU. Iyo Ampere GPU yakavakirwa pane iyo nheyo yakagadzwa naTuring. Inotumidzwa seyakakura kuburitsa chizvarwa, iyo NVIDIA Ampere GPUs inopfuura ichienzaniswa nezvizvarwa zvakapfuura pane zvese.
Iyo Ampere lineup inopa nekukurumidza shader kuita, nekukurumidza ray yekutsvagisa kuita, uye nekukurumidza AI kuita. Yakavakirwa pane nyowani nyowani maitiro enode uye iine dhizaini yakagadzirirwa kubva pasi kumusoro, Ampere chigadzirwa chinouraya chine akawanda manhamba ekutaura nezvazvo.
Iyo yakakosha yeAmpere yaive yekutora zvese NVIDIA yakadzidza neyakavakirwa Turing uye kwete kungoinatsa chete asi kushandisa yayo DNA kugadzira chigadzirwa muchikamu chitsva chekuita. Kureba kutaurwa kwakaitwa naNVIDIA pavakaunza yavo Ampere mutsara kutanga kwemwedzi uno & tichave tichitsvaga kana NVIDIA yakarova matiki ese neyakavakwa yeAmpere sezvo ongororo iyi ichave nzira yako yekutungamira kuti uone chinogadzira Ampere uye kuti inoita sei kupesana neayo vakakutangira.
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Gaming Graphics Cards - Iyo Yakanyanya Kupfuura GPU Performance Leap muRazvino Nhoroondo
Kuyedza kwanga kusiri chero giraidhi yepamoyo, yaive giraidhi yemagetsi iyo yaizove hwaro hweMangwana maGPU. Iyo ramangwana rinoonekwa izvozvi neanotevera-chizvarwa nyaradzo kuenda zvakadzama muhurukuro nezve ray kuteedzera uye AI-yakabatsirwa super-sampling maitiro. NVIDIA yaive nemusoro wekutanga naTuring uye chizvarwa chayo cheAmpere chichaita chete zvinhu zvisingaperi nguva zvirinani.
Iyo Ampere GPU inoita zvinhu zvakawanda zvechinyakare zvataizotarisira kubva kuGPU, asi panguva imwecheteyo, zvakare inoputsa chipingamupinyi kana zvasvika pakuita zvisina kujairika GPU mashandiro. Kungopfupisa zvimwe zvinhu:
Nyowani Kutenderera Multiprocessor (SM)
Nyowani Kuedza Tensor Cores
Nyowani Yechokwadi -Nguva Ray Kutsvaga Kuwedzera
Nyowani Shading Kuvandudza
Nyowani Yakadzika Kudzidza Zvimiro zveGrafiki & Inference
Nyowani GDDR6X Yakakwira-Yekuita Ndangariro Subsystem
Chitsva Chizvarwa Chechipiri NVLINK Kupindirana
Nyowani HDMI 2.1 Inoratidza Injini & Inotevera-Gen NVENC / NVDEC
Iwo matekinoroji ataurwa pamusoro apa mamwe emabhuru makuru ekuvaka eAmpere GPU, asi pane zvakawanda mukati megiraidhi yemusoro pachayo iyo yatichataura nezvayo zvakadzama saka ngatitangei.
NVIDIA GeForce RTX 30 Series Mutengo Pachikamu
NVIDIA's GeForce RTX 30 nhepfenyuro inoumbwa neakasiyana portfolio yemifananidzo makadhi. Parizvino, iwe unongo ganhurirwa kumatanho ekumusoro-kumagumo anotangira pa $ 499 US yeGeForce RTX 3070, $ 699 US yeGeForce RTX 3080, uye $ 1499 US yeGeForce RTX 3090. NVIDIA ivo pachavo vanoshevedza iyo GeForce RTX 3080 iyo mureza mifananidzo Kadhi uye kwete iyo GeForce RTX 3090.
Iyo RTX 3080 & RTX 3070 zvese zvine mutengo wakanaka uye zviri mu-mutsetse nevakatangira asi iyo GeForce RTX 3090 inobuda nemutengo we $ 1499 US. NVIDIA inodaidza iyo GeForce RTX 3090 iyo "BFGPU" uye sekureva kweshoko, zvinoita senge iri izita idzva rekushambadzira reTitan mifananidzo kadhi. Zvichida kuti isu taigona kuona Titan yakavakirwa kadhi pasi peiyo Quadro yekumaka ine inokurumidza specs kunze kwebhokisi asi iyo GeForce RTX 3090 ingori kadhi yemitambo kadhi kutanga neese emabhiza emasimba ehunyanzvi uye emabasa ekuremerwa.
Nezvo zvakati, GeForce RTX 3080 inotsiva iyo RTX 2080 SUPER pamutengo mumwechete uye iyo GeForce RTX 3070 inotsiva iyo GeForce RTX 2070 SUPER pamutengo mumwe chete. Tichifunga nezve maitiro aya, isu tinogona kuona iwo akanyanya kusiana akasiyana anodhura zvakangofanana neawo maRTX 20 SUPER akateedzana makadhi asi neakakwira kuita kunze kwebhokisi.
mutengo $ 999 US $ 1199 US $ 1199 US $ 2999 US $ 2499 US TBA
Mudiwa Mukuru weC Ultra GeForce GTX 980 Ti GeForce GTX 980 Ti GeForce GTX 1080 Ti GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3090
mutengo $ 649 US $ 649 US $ 699 US $ 999 US $ 999 US $ 1499 US
Mudiwa Mukuru Tier GeForce GTX 980 GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 SUPER GeForce RTX 3080
mutengo $ 549 US $ 549 US $ 549 US $ 699 US $ 699 US $ 699 US
High-End Ending GeForce GTX 970 GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2070 SUPER GeForce RTX 3070
mutengo $ 329 US $ 379 US $ 379 US $ 499 US $ 499 US $499
mutengo $ 199 US $ 249 US $ 249 US $ 249 US $ 399 US
$ 219 US TBA
GTX 1050 GTX 1650 KUSVIRA
mutengo $ 149 US
$ 149 US TBA
Pamusoro pekufungidzirwa / kuvandudzwa kwemutengo, matekinoroji eNVIDIA eRTX ari kutambirwa zvakanyanya neinjini huru dzemitambo uye maAPI senge Microsoft's DirectX (DXR), Vulkan, Unreal Injini, Kubatana, uye Frostbite. Kunyange paingova nemazita matatu chete eRTX akakomberedza kuvhurwa kweRTX 20 makadhi akateedzana, NVIDIA ikozvino ine angangoita makumi maviri nemasere mazita anoshandisa yavo RTX ficha yakatarwa kuti ipe chaiyo-nguva ray yekutsvaga nekutevera kwakawanda munguva pfupi iri kutevera.
Pamusoro peizvozvo, nemanyaradzo ari kuuya akasimbiswa kuratidza ray ray, vanogadzira vanogona zvakare kushandisa tekinoroji yeRTX kugadzira zvakanaka mitambo yemberi yeGeForce RTX Hardware. Parizvino, NVIDIA ine gumi nematanhatu enjini dzemitambo dziri kushandisa tekinoroji yeRTX kuti ishandiswe mumitambo yavo irikuuya uye iripo apo vese Vulkan uye DirectX 13 Ultimate APIs vari chikamu cheiyo RTX ecosystem pane PC chikuva.
Saka pakuongorora uku, ndichave ndichitarisa MSI yazvino GeForce RTX 30 SUPRIM X akateedzana makadhi emifananidzo anosanganisira iyo GeForce RTX 3090 SUPRIM X ye $ 1749.99 US uye GeForce RTX 3080 SUPRIM X ye $ 899.99 US. Makadhi ese ari maviri ane $ 249.99 uye $ 199.99 US premium pamusoro peMSRP yakataurwa naNVIDIA.
Iyo NVIDIA GeForce RTX 3090 Graphics Kadhi
Iyo NVIDIA GeForce RTX 3090 isimba rinofanira kuverengerwa pamwe chete. Zvinotora chigaro cheye inokurumidza PC yemitambo kadhi yemifananidzo isina kana chinhu chinouya kunyange padyo nayo. Zvinoshamisika nekukurumidza zvakanyanya kupfuura iyo GeForce RTX 2080 Ti inova iyo Turing yakavakirwa kumberi asi kungokurumidza hakuna kukwana kadhi reiyero kana mutengo. Iyo GeForce RTX 3090 inotakura mamwe macores, anopfuura 2x ndangariro, kushanda kwakanyanya mashandiro, uye zvakare inotakura inotevera-chizvarwa ray-kutsvaga uye tensor cores zvinoita kuti iyi ive yeinotevera-chizvarwa giraidhi kadhi.
NVIDIA yakagadzira iyo GeForce RTX 3090 kwete chete kune chero gamer asi vese vatambi avo vanoda kuve nemhando yepamusoro magiraidhi aripo kusimbisa chinotevera-chizvarwa cheAAA mazita emitambo ane akanakisa anoonekwa uye anopenga fluidity. Haisi chete iyo FPS iyo inokoshesa mazuva ano, iwo anoonekwa, uye inotsvedza furemu chiyero zvakare uye izvi ndizvo chaizvo izvo iyo GeForce RTX 30 nhevedzano inoitwa kuti ibudirire pairi. Pane zvakawanda zvekutaura nezvazvo maererano neNVIDIA's flagship Ampere yemitambo makadhi emifananidzo saka ngatitangei nekutaurwa.
Iyo NVIDIA GeForce RTX 3080 Graphics Kadhi
Pamwoyo weNVIDIA GeForce RTX 3090 kadhi yemifananidzo iri GA102 GPU. Iyo GA102 ndeimwe yeakawanda Ampere GPUs yatichave tichiwana pachikamu chemitambo. Iyo GA102 GPU ndiyo inomhanya kwazvo GPU yemitambo iyo NVIDIA yagadzira. Iyo GPU yakavakirwa paiyo Samsung's 8nm tsika maitiro node yakagadzirirwa kunyanya kune NVIDIA uye inoratidzira huwandu hwakazara hwe28 Bhirioni transistors. Inoyera pa 628mm2 inoita kuti ive yechipiri yakakura kwazvo yemitambo GPU yakambogadzirwa pazasi peiyo Turing TU2 GPU.
Iyo nyowani shader musimboti pane iyo NVIDIA Ampere dhizaini iri 2.7x nekukurumidza, iyo nyowani RT cores iri 1.7x nekukurumidza ukuwo matsva Tensor cores ari anosvika ku2.7x nekukurumidza kupfuura iyo yapfuura chizvarwa Turing GPUs. Iyo yechipiri Generation RT musimboti inonunura yakatsaurwa Hardware-yakakurumidza ray-yekutsvagisa mashandiro & maficha kaviri iyo ray / matatatu mharadzano ine panguva imwe chete RT mifananidzo uye kuverenga mashandiro.
YeGeForce RTX 3090, NVIDIA yakagonesa yakazara 82 mauniti mayuniti pane yayo mureza inokonzeresa muhuwandu hwe10496 CUDA cores. Pamusoro peiyo CUDA cores, NVIDIA's GeForce RTX 3090 inouyawo yakazara neinotevera-chizvarwa RT (Ray-Tracing) cores, Tensor cores, uye nyowani SM kana kutenderera akawanda-processor mauniti.
Panyaya yekurangarira, iyo GeForce RTX 3090 inotora nhanho hombe pamberi, iine inopfuura zvakapetwa kaviri ndangariro yeRTX 2080 Ti. Iyo mureza unouya wakazara ne24 GB yekurangarira uye naiyowo inotevera-chizvarwa GDDR6X dhizaini. Iine Micron yazvino uye yakakura kwazvo memory memory inofa, iyo RTX 3090 inogona kuendesa bandwidth iyo ingango rova ​​1 TB / s. Iyo GeForce RTX 3090 inouya ne24 GB yeGDDR6X ndangariro pakumhanya kwe19.5 Gbps. Izvo pamwe neakazara asina kuchekwa bhazi interface ye 384-bit ichaendesa anowedzera bandwidth ye936 Gbps.
NVIDIA GeForce RTX 30 Series 'Ampere' Graphics Kadhi Rondedzero:
GPU Zita Ampere GA104-200 Ampere GA104-300 Ampere GA102-150 Ampere GA102-200 Ampere GA102-300
Node Node Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm
Transistors 17.4 Bhiriyoni 17.4 Bhiriyoni 28 Bhiriyoni 28 Bhiriyoni 28 Bhiriyoni
Tensor/RT Cores 152 / 38 184 / 46 232 / 58 272 / 68 328 / 82
Kuwedzera Clock 1665 MHz 1730 MHz TBA 1710 MHz 1700 MHz
Memory Memory 14 Gbps 14 Gbps 320-bit 19 Gbps 19.5 Gbps
Mutengo (MSRP / FE) $ 399 US? $ 499 US $ 599 US? $ 699 US $ 1499 US
Kutanga (Kuwanikwa) Mbudzi 2020? 29th Gumiguru 320-bit 17th September 24th September
Kana iwe uchida kuverenga yedu yakazara NVIDIA Ampere GPU yekushongedza kwakadzika kudhizaina uye GeForce RTX 3090 Yevatangi Yekuongorora ongororo, tungamira kune iyi kubatanidza.
Iyo MSI GeForce RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM X ndedzimwe dzakanakisa tsika dzakasiyana magadzirirwo eGeForce RTX 30 akateedzana mhuri. MSI yakabuda yese pamwe nekugadzirwa kweSUPRIM X akateedzana makadhi emifananidzo izvo izvozvi zvinomira tier pamusoro peiyo Gaming X Trio mutsara. MSI yakagamuchira zvakare kutonhora kutsva & acoustics dhizaini yeSUPRIM X akateedzana ayo isu tichave tichitaura nezvazvo zvakadzama.
Pamusoro peiyo dhizaini dhizaini, iyo RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM X mifananidzo yemakadhi inouya neisina-kurehwa PCB, iine 20 chikamu simba dhizaini iyo inoratidza yakakwira mhando yezvinhu kupfuura izvo zvinongedzo izvo zvatova chaizvo chaizvo dhizaini pachayo pachayo.
Panyaya yekumhanya kwewachi, iyo MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X kadhi yemifananidzo inoratidzira 1860 MHz yekuwedzera wachi (Gaming & Yakanyarara Mode) ine TGP ye420W nepo MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X ichisimudzira wachi ye1905 MHz (Mutambo & Yakanyarara Mode) ine TGP ye370W. Makadhi ese ari maviri anokwira kumusoro kuburikidza nekatatu 8-pini yekubatanidza kumisikidza. Mamwe ese maratidziro anosanganisira ekurangarira wachi anotariswa pane zvakatemwa masheya.
Kutevera ndezvimwe zvezvinhu zveMSI GeForce RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM X tisati taenda zvakadzama:
24 GB GDDR6X Chirangaridzo (RTX 3090)
10 GB GDDR6X Chirangaridzo (RTX 3080)
RatidzaPort x 3 / HDMI x 1
TRI FROZR 2S Thermal Dhizaini
TORX Fan 4.0: Chigadzirwa chekubatana, mashizha evanoshanda anoshanda ari maviri kuti agadzire zvisati zvamboitika zvemhepo yakanangisa kumanikidza.
Core Pipe: Precision-yakashongedzwa kupisa pombi chengetedza max kusangana neGPU uye nekuparadzira kupisa pamwe nehurefu hwakazara hweheatsink.
Kuyerera Kwemhepo: Usazvidikitira, YeMhepo Yekudzora inotungamira mhepo kuenda chaiko kwazvinofanirwa kuve kwekutonhora kwakanyanya.
Vhara Makota Heatpipe & Heatsink: Ndangariro mamodule ane avo epedyo makamuri kupisa pombi uye heatsink yekuzvipira kutonhodza.
Mhangura Baseplate: Iyo yakasimba nickel-yakafukidzwa mhangura baseplate inoendesa kupisa kubva kuGPU kuenda kune ese kupisa mapaipi.
Dual BIOS inokupa iwe sarudzo yekuisa pekutanga kuzere kuita mune GAMING modhi kana yakaderera ruzha muSILENT modhi.
MSI's yakasarudzika Dragon Center software inoita kuti iwe utarise, tweak, uye gadziridza zvigadzirwa zveMSI mune chaiyo-nguva.
Kudzora mwenje kune ese ari maviri MSI uye inoenderana yechitatu-bato RGB zvigadzirwa.
MSI GeForce RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM X Mifananidzo Yemifananidzo Yemifananidzo:
Iyo MSI SUPRIM X Graphics Makadhi Ine Tri Frozr 2S Kutonhora
Nemisiyano iri munzira, ikozvino ngatitaurei pamusoro pekufananidzwa uye nezvakanyanya kukosha zveSUPRIM X dhizaini. Iwo SUPRIM X mifananidzo yemakadhi anotaridzika akakwirira kupfuura maGame X X mhando uye ini ndinotogona kutaura kuti iwo anowirirana nemhando yeiyo Mheni dzakateedzana iyo yakasarudzika yemhando yekugadzira. Makadhi ese ari maviri anoshandisa epamberi Tri-Frozr inotonhorera ayo ari kutsiva kweMSI Twin Frozr akateedzana ayo ave achishandiswa zvakanyanya muazvino uye ekupedzisira-chizvarwa mifananidzo yemakadhi kubva kuMSI.
SUPRIM inoreva zvinopfuura kungoita nyowani mifananidzo yemakadhi akateedzana kubva kuMSI. Makumi emakore einjiniya wedunhu uye kutonhorera kusimudzira zvakatungamira kune nyowani chigadzirwa dhizaini iyo
inobatanidza mukurumbira mukutaridzika uye kugona kwayo.
Pfungwa inotendeukira kuchokwadi nemhando yepamusoro yezvinhu zvinouya pamwechete senge yakakora mhangura mukati mePBB kuti brushed aluminium yakanamirwa pamatanho akachekwa mativi ekunze kwekutonhora.
Kutarisisa pane ruzivo rwevashandisi uye mhando zvinoratidzwa mune zvakadzama, senge mbiri BIOS
kugadzirirwa kuti Chinyararire kunze kwebhokisi kunyaradzwa.
Iri kadhi rakaputirwa nematanho akasimba emagetsi ekugara, rakatonhora neakawanda
heatsink sisitimu yekusimudzira kuita kwakanyanya, uye kupfekedzwa mune yechizvino aesthetic kuratidza yeakakwira maitiro ehupenyu
MSI yakabatanidza uye yakanatsa zvinhu zvakati wandei muiyo nyowani Tri Frozr dhizaini yeSUPRIM X iyo yava kunzi Tri Frozr 2S nepo Gaming X Trio dzakasiyana dzichiratidza kutonhora kweTri Frozr 2. Kutanga ndeye TORX fan 4.0 iyo inoshandisa chindori dhizaini iyo inobatanidza maviri fan-mashizha neayo ega ega ega kuwedzera kufefetera kuenda mukati memukati heatsink gungano. Aya mafeni anoumbwa nekaviri bhora rinotakura dhizaini iyo inovimbisa chinyararire kushanda mune inorema mitoro.
Iwo mafeni anoteerera zvizere neZero Frozr Technology uye anonyatso kuve nenzvimbo nhatu. Zvese izvi zvaizogara pa0 RPM (idle state) kana tembiricha isingapfuure 60C. Kana yapfuura 60C, vese mafeni vangatanga kutenderera. Iwe unogona kushandura izvo kuburikidza neMSI yekumisikidza pani kana iwe uchida kumwe kutonhorera kuita pamusoro peruzha mutoro asi chiri chinhu chepamusoro chandinoita chandinofarira.
Pamusoro pevateveri vanotonhorera, iyo VIP heatsink nyowani yakagadzirirwa kuve denser nekushandisa iyo nyowani wave wave yakakomberedzwa 2.0 yekupedzisira dhizaini. Iyo nyowani heatsink inoshandisa vanodzora kubvumidza yakawanda mweya kupfuura nemumapapiro zvinyoro nyoro, pasina kukonzeresa kusagadzikana kungaite ruzha rusingadiwe. MSI inofungidzira 2 degrees (C) inodonha mumatembiricha pamwe neyakagadziridzwa dhizaini maringe neye yapfuura chizvarwa kutonhora system.
Kutaura nezve heatsink, iro rakakura bhuru rinoumbwa nomwe dzemhangura dzakaenzana dzakaumbwa kupisa pombi ine yakanyanya kugadzirwa dhizaini kupisa kupisa kubva pachigadziko chendarira kuenda kune heatsink zvakanyanya zvinobudirira. Iyo bhesimendi pachayo yakasimba nickel-yakafukidzwa base ndiro, ichiendesa kupisa kune kupisa mapaipi nenzira inoshanda kwazvo. Kuti ibvise zvese, MSI inoshandisa yavo yakasarudzika Thermal Compound X iyo inonzi inopa yakanyanya kupisa tembiricha uye kupisa kupisa kana ichienzaniswa neyechinyakare TIM kunyorera.
Kudedera yekirasi yakasvinwa kutaridzika, backplate iri paSUPRIM X akateedzana inopa yakanaka kuona kupedzisa kukadhi. Iyo zvakare inosimbisa iyo kadhi uye nekutenda kune mamwe nehungwaru akaiswa maturu anopisa anotobatsira kuchengetedza tembiricha yakaderera.
Iyo MSI GeForce RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM akateedzana kadhi yemifananidzo inouya mukati meyakajairika kadhibhokisi bhokisi. Iko kumberi kwemapakeji ese kune hombe logo ye "GeForce RTX" pamwe neiyo "MSI" logo pakona yepamusoro kuruboshwe uye ne "Gaming X Trio" yakateedzera chiratidzo pakona yezasi-kuruboshwe. Mufananidzo muhombe weiyo mifananidzo kadhi pachayo inoratidzwa kumberi iyo inopa chiratidzo chakanaka cheSUPRIM X dhizaini.
Iko kurongedza kwakaisa kusimbisa kukuru parutivi rweRTX yezvinhu sezvo chinhu chekutanga chakanyorerwa neAIBs chichava chivakwa cheNVIDIA Ampere, Ray Tracing & DLSS rutsigiro. NVIDIA yakabheja ramangwana remitambo yavo yeGPU paRay Tracing rutsigiro sezvo aya ari makadhi ekutanga kupa rutsigiro rwechinhu chitsva.
Iko kuseri kwebhokisi kune zvakajairika, kuratidza iwo makuru maficha uye kududzirwa kwemakadhi. Zvinhu zvitatu zvakakosha zveMSI's epamusoro-tier makadhi etsika kuita kwayo kuri kupisa kunoitwa nekunyatso gadzira dhizaini, iyo nyowani Tri-Frozr kutonhora sisitimu, uye mutsva wave-wakakombama 2.0 heatsink iyo ichapa zvirinani kutonhora mashandiro zvichienzaniswa neyakajairika flat. -surfaced yekupedzisira heatsinks.
Iko kune zvakare kutarisisa kuGeForce.com pane yega yega kadhi yeAIB iyo iyo vashandisi vanogona kudhawunirodha madhiraivha azvino uye application yeGeForce Zvakaitika izvo zvinofanirwa kune vatambi kuti vawane ese maseti emamakadhi matsva.
Mativi ebhokisi zvakare anotikwazisa neiyo hombe yeGeForce RTX yekumaka. Kune zvakare kutaurwa kwe24 GB / 10 GB GDDR6X (RTX 3090 / RTX 3080) ndangariro inowanikwa pakadhi.
Kunze kwebhokisi, iyo giraidhi kadhi uye neyekushandisa package inobatwa zvine simba nekupupa furo. Iyo kadhi yemifananidzo inouya nemashoma zvishongedzo uye emanyowani ayo anogona kunge asiri ekushandisa zvakanyanya kune vanofarira hardcore asi anogona kubatsira kune vakanyanya vatambi vemitambo.
Kadhi iri rakaputirwa zvakanaka mukati meye anti-static chifukidziro icho chinobatsira kudzivirira chero zvisingadiwe zvimisikidzo zvakamira panzvimbo dzakasiyana siyana zvinogona kukuvadza giraidhi kadhi. Chinhu chinonyanya kufadza chandakawana mupakeji yaive giraidhi yemakadhi ekutsigira. Iri bracket rinobatanidza iyo giraidhi kadhi kune iyo casing, ichipa zvirinani kugadzikana uye inodzivirira chero mhando yekukombama iyo inogona kuitika nekuda kwehuremu hweiyo inorema yeGaming X Trio akateedzana makadhi emifananidzo
Anobatsira emabhuku uye magwaro ekumisikidza akarongedzwa mukati meMSI yakanyorwa tsamba tsamba. Iko kune MSI Vanokurumidza Vashandisi Nhungamiro, Yekutsigira bracket yekumisikidza gwara, tsamba yekunamira, iyo MSI DIY comic, uye imwechete driver dhisiki. Zvakanakisa kufuratira mutyairi dhisiki uye kumisikidza yazvino software uye madhiraivhita egiraidhi zvakananga kubva kuNVIDIA uye MSI mapeji ewebhu zvepamutemo sezvo iwo akatumirwa mumadhisiki anogona kunge ari ekare maBhaibheri uye asinganunure mashandiro akanaka emakadhi ako emifananidzo.
Mushure mekutorwa kwepakeji, ndinogona kuzotanga kutaura nezve kadhi pacharo. Chinhu ichi chikara uye ini handigoni kumirira kuti ndizviedze kunze kuti ndiwane mhando yekuvandudza mashandiro andinowana pamusoro pemanje-gen makadhi.
MSI's Tri Frozr kupisa kunyura ndeimwe yemahombekombe makuru heatsink kutonhora mhinduro dzandakamboedza. Ini ndakatanga kuyedza iyo Gaming X Trio apo MSI yakaburitsa iyo 1080 Ti zvakasiyana kumashure mu2017 uye iyo yaive dhizaini dhizaini mune yayo chaiyo. Iine RTX 30 makadhi akateedzana, MSI yakaenderera mberi nekugadzirisa iyo Twin Frozr dhizaini. Iwo makadhi anoyera zvakafanana pa336 x 140 x 61 mm uye anorema mukati pa1882 & 1895 gramu, zvichiteerana. Makadhi ese ari maviri anoratidzira akaenzana 2.5 kukwirira slot iyo inotarisirwa yemanhasi-ekupedzisira-makadhi.
Iwe unofanirwa kugara uchifunga nezve kukwirira kana uchienda kune mbiri kadhi mhinduro sezvo yako kesi kana mamaboardboard PCIe slot mubatanidzwa inogona kusatendera yakadaro setup. Chifukidzo chinotonhorera chinotambanudza nzira yese yekumashure kwePBB uye inoda casing ine yakanaka yemukati nzvimbo yekumisikidzwa kwakakodzera.
Iko kuseri kwekadhi kune backplate yakasimba iyo inotaridzika. Iyo backplate inopa yakawanda yakawanda mashandiro pane kungo tarisa izvo zvandinodzokera kwazviri zvishoma.
Panyaya yekugadzira, isu tiri kutarisa iyo yakagadziridzwa vhezheni yeTri Frozr heatsink iyo yava musiyano wayo wechitanhatu nepo weGaming X akateedzana, ino ndiyo yechipiri iteration. Musiyano wekutanga wakatanga neGTX 2 Ti Mheni, yechipiri yaive 780 Ti Mheni, ndokuzouya iyo 980 Ti Gaming X Trio, iyo 1080 Ti Mheni, uyezve iyo RTX 1080 uye RTX SUPER Gaming X Trio makadhi emifananidzo.
Iyo nyowani heatsink inotaridzika senge yenyuchi-kumusoro vhezheni yeGaming X Trio ine shanduko huru kuve chifukidziro uye heatsink dhizaini inoratidzira ine hasha chifukidzo dhizaini kumberi, ichitora matema uye esirivheri maplatelet erinenge iine iyo RGB inoburitsa acrylic akacheka pa kumberi. Mativi acho anouyawo neiyo huru RGB yekumisikidza bar iyo inovhenekera kana kadhi rikaiswa simba.
Kuuya kune vateveri, iyo kadhi inonyatso kuratidza maviri akasiyana fan dhizaini inoenderana neTorx 4.0 system. Vese vatatu mafeni vanoratidzira mhete-yakavakirwa dhizaini kubvumidza iyo yepamusoro yemhepo kutenderera mukati meiyo huru heatsink. Vese vateveri vanoendesa zvakapetwa bhora rine dhizaini uye vanogona kugara kwenguva yakareba vachiri kushanda chinyararire.
MSI zvakare inoratidzira yavo Zero Frozr tekinoroji pane iyo Tri Frozr heatsink. Ichi chimiro hachizotenderi mafeni pakadhi kunze kwekunge vasvika pane chimwe chikumbaridzo.
Muchiitiko cheiyo Tri Frozr heatsink, iwo muganho wakaiswa ku60C. Kana iyo kadhi iri kushanda pasi pe60C, mafeni haazotenderera zvinoreva kuti hapana imwe ruzha yaizogadzirwa.
Ini ndadzoka pakutaura nezve yakazara-kufukidza, yakazara simbi-yakavakirwa backplate iyo kadhi inoshandisa. Iyo ndiro yose yakagadzirwa nesimbi yakasimba nemakona akapoteredzwa anowedzera mukugara kwekadhi iri. Iyo brushed matte-nhema kupedzisa pane backplate inopa yakasarudzika aesthetic. Iyo kadhi yemifananidzo inouyawo nekombiki pcb dhizaini zvinoreva kuti chifukidziro, heatsink, uye backplate zvese zvakawedzeredzwa kupfuura iyo PCB. Wechitatu fan anofuridza mweya kuburikidza neheatsink uye anoipururudza kubva kune akachekwa ari kumucheto chaiko kweshure.
Iko kune akachekwa munzvimbo dzekuisa kuti asvike zvirinyore pane iyo kadhi yemifananidzo. Isu tinogona zvakare kuona iyo MSI Dragon logo kumashure iyo inoratidzika inoshamisa. MSI irikushandisawo mapads epasi pazasi peplate iyo inopa kumwe kutonhorera kumatunhu emagetsi paPCB. Chinhu chinonyanya kufadza kuona kuseri parutivi rweplate backplate ndeye hombe yekuchengetedza simbi bracket iyo inowedzera kumwe kuwedzera kumanikidza kuti ubudise zvakanaka kupisa kubva kuGPU kuenda kune heatsink.
Nekunze kwekadhi kwaitwa, ini zvino ndichatanga kutora tariso pane zviri pasi pehood yemakadhi emifananidzo. Chinhu chekutanga kubata ziso rangu inyonganiso yekupedzisira stack iyo chikamu che beefy heatsink iyo makadhi anoshandisa.
Iyo hombe yekupedzisira stack inomhanya nzira yese kubva kumberi uye kumashure kwePCB uye iri gobvu zvekuti haugone kuona kuburikidza naro. Izvo zvinouyawo neiyo wave-yakakomberedzwa 2.0 yekupedzisira dhizaini dhizaini iyo ini yandinoda kujekesa mwenje sezvo iko kutendeuka kubva kuchinyakare fesheni dhizaini uye imwe iyo inogona kunyatso kupa zviri nani kutonhorera pakakwirira-kumagumo magiraidhi makadhi senge iyo RTX 3090 & RTX 3080.
Iyo heatsink yakagadzirirwa kuti ive denser nekushandisa iyo wave curved fin dhizaini. Inobvumira mweya wakawanda kupfuura nemumapapiro zvinyoro nyoro, pasina kukonzera bongozozo raizoguma neruzha rusingadiwe. Mhepo Yekudzora Tekinoroji inotungamira iyo yekufema yakanangana nemapombi ekupisa, nepo panguva imwe chete ichigadzira yakawanda nzvimbo nzvimbo yemhepo kuti itore kupisa kwakawanda isati yasiya heatsink.
MSI inowedzera kumwe kudzivirirwa kune yayo inoshamisa PCB nekusanganisira iyo ine rugged anti-kukotama ndiro. Izvi zvinoshandawo seyeuchidzo uye MOSFET kutonhora ndiro apo iyo PWM heatsink ine micro fins inochengeta iyo VRM inotonhorera pasi pekunetseka mamiriro.
I / O pamakadhi emakadhi ane mifananidzo pamwe nereferensi scheme iyo inosanganisira matatu Ratidza Port 1.4a & imwe chete HDMI 2.1 chiteshi.
Iko zvakare kune maviri-BIOS switch pane kadhi iyo inouya yakafanogadzirirwa neSilent & Gaming modes. Iyo BIOS haina kukanganisa iwo ma profiles ewachi asi inokanganisa iyo yakanyanya simba muganho, ichigonesa yakakwira fan kumhanya kune zvirinani kutonhora uye akatsiga mawachi.
MSI GeForce RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM X Kurutivi-Na-Rutivi:
MSI inoshandisa makumi maviri echikamu PWM dhizaini inosanganisira ayo Mauto Kirasi zvikamu senge Hi-C Caps, Super Ferrite Chokes, uye maJapan Solid Caps. Mukuru weVRM controller ndeyeOneSemi NCP20. YeVRAM, mutungamiriri ndeye UPI inogadzirwa uS81610Q nepo maMOSFET achiumbwa neOnSemi 5650.
Iyo kadhi inoshandisawo iyo GDDR6 memory kubva kuMicron iyo inoshanda pa19.5 / 19.0 Gbps padivi pe 320/384-bit yakafara memory interface.
Iyo MSI GeForce RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM X vane simba-vane nzara makadhi emifananidzo sekuratidzwa neyakajairika dhizaini yavo. Zvazviri, makadhi ese ari maviri anoshandisa katatu-pini chinongedzo chinogadziriswa kupesana neiyo imwe-gumi nembiri-pini EPS kumisikidza iyo iyo misiyano yeFE. Iwo makadhi akaverengerwa pa8W & 12W TGPs, zvichiteerana.
MSI GeForce RTX 3090 & RTX 3080 SUPRIM X Mystic RGB Mwenje Yemwenje:
MSI SUPRIM X makadhi akateedzana anoshandisa yavo Mystic Mwenje RGB tekinoroji kukupa iwe inoonekwa inofadza yekuvhenekera ruzivo pamakadhi ako emifananidzo. Pane huwandu hwe5 dzakasiyana dzeRGB mhedzisiro iwe dzaunogona kusarudza kubva uye makadhi ane 3 RGB yekumisikidza mapoinzi kumberi, imwe kumashure, uye rimwe bharanzi rakakomberedza divi rekadhi rinotaridzika chaizvo. Iwe unogona kugadzirisa zvizere mwenje yeRGB kune zvaunofarira uchishandisa iyo MSI Mystic Light application kubva pawebhu reMSI.
Takashandisa iyi inotevera test system kuti ienzanise pakati pemakadhi akasiyana-siyana. Mafambisi ekupedzisira aivepo panguva yekuedzwa yakashandiswa kubva ku AMD neNVIDIA pane shanduro yakarongedzwa ye Windows 10. Yese mitambo iyo yakaedzwa yakanamirwa kune yazvino vhezheni yekuita zvirinani kuita kweNVIDIA uye AMD GPUs.
MSI SUPRIM X Kuisa Setup:
Vhidhiyo Cards MSI GeForce RTX 3090 KUSVIRA X
MSI GeForce RTX 3080 KUSVIRA X
MSI GeForce RTX 3090 Mutambo X Trio
MSI GeForce RTX 3080 Mutambo X Trio
MSI GeForce RTX 3070 Mutambo X Trio
MSI GeForce RTX 2080 Ti Mheni Z
MSI GeForce RTX 2080 SUPER Mutambo X Trio
MSI Radeon RX 5700 XT Mutambo X
vatyairi AMD Radeon Adrenalin Shanduro 20.7.2
DOOM Eternal inounza gehena pasi pano neVulkan powered idTech 7. Isu tinoyedza mutambo uyu tichishandisa iyo Ultra Nightmare Preset uye tinoteedzera yedu yemukati-yemutambo mabhenji kuti tigare tichienderana sezvinobvira.
Yakagadziridzwa neRockstar San Diego, Red Dead Redemption II ndeimwe yemitambo inoshamisa kwazvo-yakavhurika-yepasirese yandakatamba kusvika parizvino inotsigirwa nenyaya yakapfuma yakaiswa yakakomberedza protagonist, Arthur Morgan. Mutambo uyu wakavakirwa paRAGE injini iyo inoratidza kupenga kwehuwandu hwegrafiki kutendeka asi zvakare inoda simba rakawanda kumhanyisa kuburitswa kunze. Nechinangwa cheiyi bvunzo, isu tinoseta magiraidhi magadziriso ku Ultra neAA yakashandurwa yakaremara.
Wolfenstein yadzoka muThe New Colossus uye inoratidzira inokurumidza-kumhanya, gory, uye hutsinye FPS chiito zvachose! Mutambo zvakare unotiisa kumashure muNazi-inodzorwa nyika seBJ Blazkowicz. Gadza panguva yeramangwana rakatarisana apo maNazi akakunda Hondo Yenyika, mutambo unoratidza kuti unogona kunakidza uye unogona kuva nehutsinye kumutambi uye kumuvengi futi. Kugonesa iro zita nyowani zvakare, id Tech 6 iyo inozivikanwa kwazvo mushure mekubudirira iyo DOOM yave. Nenzira, ID yakawanazve yavo inokudzwa FPS midzi uye vari kuuraya nemazita ese matsva.
Nhandare yeHondo V inodzosa chiito cheHondo Yenyika 2 shooter genre. Uchishandisa yazvino Frostbite tech, mutambo unoita basa rakanaka rekutarisa naka munzira dzese dzinokwanisika. Kubva munzvimbo dzakavhurika-pasirese kune chiito chakasimba uye chinopisa nepfuti, uyu mutambi wevazhinji uye mumwe chete-mutambi FPS zita iri ndeimwe yeanotarisisa Hondo dzeHondo kusvika zvino.
Sam Porter Bridges aendesa imwe yemitambo inonyanyotarisirwa yePS4 kunharaunda yePc uye akavhura nyika nyowani yemikana. Uyu waive mutambo wekutanga kuratidza iyo Decima Injini paPC uye zvisina mubvunzo wakazviita zvakanakisa. Rufu Stranding inogona kusaratidza ray yekutsvaga mhedzisiro asi inoratidza kuti DLSS inogona kushandiswa zvinobudirira kunyangwe iyo RT isipo. Isu takaiyedza iyi sezvatakaita mukutanga kwedu kufukidza neDLSS inogoneswa.
Forza Horizon 4 inotakura yakavhurika-yepasirese mijaho tsika yeiyo Horizon akateedzana. Iyo yazvino DX12 inofambiswa inopinda yakarongedzwa zvakagadzirwa uye zvinoshamisa zvakaitwa zvakanaka uye inoratidzira huru yemitambo yeDX12. Isu tinoshandisa mabhenji anomhanya tichinge tiine ese marongero akaiswa kune asiri-ane simba neisina kuvharwa furemu kuunganidza iyi mhedzisiro.
Hitman 2 (DX12 Yakakwirira Kupedza)
Hitman 2 ndiyo sequel yakakurumbira zvikuru kuna 2016 Hitman iyo yakanga iri kugadziridza uye kufungidzira mutambo kubva pasi. Nekutarisa pamatambo ezvinyorwa kuburikidza nemamishinari akasiyana-siyana, mutambo zvakare unokuita iwe kuti uite seAgent 47 uyo anotanga pane imwe mission yekuvhima pasi chakavanzika Shadow Client. Mutambo wacho unotangaira paIO inonzi Interactive's Glacier 2 injini yakagadziridzwa kuti ipe zviratidzo zvinoshamisa uye zvakatipoteredza kune imwe neimwe yepamusoro pakushandisa DirectX 12 API.
Sequel to The Rise of the Tomb Raider, Shadow yeThe Tomb Raider inotaridzirwa nekunyoreswa Foundation Engine iyo inopa maonero echokwadi uye zviitiko zvakanakisisa zvakamboonekwa muTomb Raider Game. Mutambo uyu unyanzvi hunoshandiswa uye hunonyatsoratidza simba rejini yejikisi iri muchirevo chazvino.
Metro Ekisodho inoenderera mberi nerwendo rweArtyom kuburikidza nenyika yenyukireya yeRussia nenzvimbo dzayo. Ino nguva, iwe wakagadzwa pamusoro peMetro, uchidarika nematunhu akasiyana siyana nenzvimbo dzakasiyana. Mutambo ndeimwe yemazita ekutanga ekuratidzira tekinoroji yeNVIDIA's RTX uye inoita mushe pakuratidzira mhedzisiro yekutsvaga-ray mumakona ese.
Borderlands 3 yagadzira nzira yayo yekuyera mutsara nekuda kwekuda kwakasimba kwevatambi uye kungoendesa ZVIMWE Borderlands. Mutambo wakaedzwa neakawanda marongero pasi peiyo DX11 preset sezvo iyo DX12 preset isingaunze chero kuvandudzwa kunooneka mune chero furemu rate kana magirafu panguva ino.
Far Cry 5 mutevedzeri akasarudzika kune akamutangira uye anoitika muTariro County, inzvimbo yekufungidzira yeMontana. Iyo huru nyaya inotarisana nekutenderera kwezuva rekuparadzwa kwePurojekiti paEdeni's Gate uye mutungamiri wayo anokwezva Joseph Mbeu. Iyo inoshandisa beefed-up Dunia Injini iyo pachayo iri yakagadziridzwa vhezheni yeCryEngine kubva kuCrytek.
Hapana giraidhi kadhi ongororo rakakwana pasina kuongorora tembiricha yayo uye kupisa kwemhepo. Iyo MSI GeForce RTX 3080 Kubheta X Trio kadhi yemifananidzo inouya nekatatu-fan inotonhorera ine 0db fan tekinoroji, hofink hombe iyo inoumbwa neanoverengeka aruminiyamu mapaipi uye kupisa mapaipi uye yakawedzera backplate iyo inovhara iyo yose PCB.
Ini ndakanyora mhedzisiro yekushandisa simba nekuyedza kadhi rega rega pasi pekusashanda uye kushushikana kwakazara apo kadhi racho raimhanya mitambo. Yese grafiti kadhi inogadzira inoisa default TDP yekadhi iyo inogona kusiyanisa kubva kumutengesi kuenda kumutengesi zvichienderana nemaawa ekuwedzera kana bhodhi maficha avanobaya pamakadhi avo etsika. Default TDP yeiyo RTX 3090 yakaiswa pa350W nepo iyo MSI tsika modhi iine TDP ye370W.
Zvakare, zvakakosha kuti uzive kuti iyo 8nm maitiro kubva kuSamsung inowedzera huwandu nekukomberedza 2x maringe nechizvarwa chakapfuura. NVIDIA iri kupwanya kunyange hombe huwandu hwevatapuri uye mamwe macores kupfuura avo makadhi apfuura, ichiita imwe yeanonyanyisa machipisi akavakirwa parizvino. Izvo zvinogona kutora simba rakawanda uye mhedzisiro inoratidza izvo.
Iyo MSI GeForce RTX 3090 & GeForce RTX 3080 SUPRIM X inodanidzira premium, kubva pamasikirwo avo, mashandiro avo, uye kumutengo wavo. Iyo SUPRIM X mutsara ndeyechokwadi MSI kosi-kugadzirisa ayo OG Kubheta X Trio kushomeka uye zvinoita sekunge imwe yekuwedzera basa yakabhadhara.
Makadhi ese ari maviri anouya neakafanana kutonhora dhizaini uye premium PCB zvikamu izvo zvakafukidzwa nepamusoro weti uye yakagadziridzwa, Tri Frozr 2S kutonhora system. Iyo inotonhorera inonyanya kudikanwa kuti kadhi riite panguva dzakadzikama wachi makadhi ese ane 350W + TGP. Iyo RTX 3090 inotyora 400 Watt chipingamupinyi uye inokwira kusvika ku420W asi isu takaita kubva paine mamwe misiyano inoenda neanonyanya hasha & asiri ehurumende 450W BIOS's.
Iyo yekuwedzera 7% simba muganho wemakadhi aya zvakare inopa mamwe akanaka OC kugona asi iwe unogona Push Ampere zvese zvaunoda asi unongowana miniti inodzoka. Cherekedza kuti iyo RTX 3090 inoswedera padyo ne500W yekushandisa inova chaiyo mabonkers eimwe giraidhi ard uye yepamusoro yandakamboona imwe-GPU kadhi kuenda.
Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti nepo maTGP emakadhi ese ari maviri aona kuwedzera kwakanyanya (Kusvika 70W yeRTX 3090 & 50W yeRTX 3080), iyo inotonhorera inoita basa rinoshamisa nekuchengetedza makadhi ese ari maviri akatsiga uye anotonhorera pasi pe70C. Iyo RTX 3090 yakaona temps yepamusoro yakatenderedza 69C nepo iyo RTX 3080 ichimhanya pane inotonhorera 65C temp. Ose ari maviri akabatanidzwa neakanyanya akanyarara profil iyo yakaenzana padhuze-zero fan ruzha. Kana iwe uchida iyo yekuwedzera kutonhora kuita, ipapo kutendeuka mafeni kusvika ku100% kunozotungamira kune sub-60C temps asi mukudzoka, iwe unofanirwa kutarisana neruzha fan ruzha iyo inozoita zvishoma kuoneka panguva iyoyo.
Iyo katatu-fan mhinduro inouya ne0db fan tekinoroji iyo kunze kwekunge kana kusvikira iwe uchinge wabata 60C isingazungunuke zvachose. Izvi zvinobvumira yakaderera ruzha mazinga kana iwe usiri kuita chero giraidhi-yakasimba mabasa. MSI yakaenda nzira yese nekusanganisira yakazara yakazara simbi backplate pakadhi iyo inouya neakaviri maviri emhangura kupisa mapaipi ekunyatso kuendesa kupisa kubva kumashure. Kumashure kwekadhi kwakakoshawo tichifunga kuti pane gumi nemaviri emamojuru emamojimendi anoratidzwa kune rimwe divi rePBB iyo inoda kutonhodzwa (RTX 12 SUPRIM X).
Iyo RGB haina kudarika uye Chiedza cheMystic chiri kumberi uye mativi chinopa chaiyo yakanaka aesthetics yekadhi pachayo. Iyo brushed aluminium backplate, iyo mbiri BIOS switch, uye dhizaini dhizaini ndizvo zvinoita kuti makadhi aya anyatsooneka kubva kuGaming X Trio akasiyana.
Iye zvino mitengo, MSI iri kubhadharisa hefty $ 249.99 US premium yeiyo RTX 3090 SUPRIM X inodhura $ 1749.99 US, uye $ 199.99 US premium yeRTX 3080 SUPRIM X inodhura $ 899.99 US. Izvo zvakanyanya kunyangwe zvichienzaniswa neiyo RTX 30 Kubheta X Trio dzakateedzana idhura $ 1699.99 uye $ 759.99 US, zvichiteerana. Pamutengo uyu, iwe unowana 3-5% musiyano wekuita zvichienderana nekuti uri kuenzanisa iyo Gaming X Trio akasiyana kana iwo FE mamodheru. Panguva imwecheteyo, tinoziva kuti vadyidzani veNVIDIA veAIB vanopihwa-kumanikidzwa panguva ino saka ichave yakaoma nguva kutenga makadhi (kana uchigona kuwana rimwe).
Chandinotenda ndechekuti iyo SUPRIM X mutsara kubva kuMSI ndizvo zvinofanirwa kuve mutambo weGaming X Trio kubva pakutanga. Ivo vanoyevedza kwazvo uye vanoratidzira imwe yeakanakisa uye neakanaka kuvakwa dhizaini dhizaini yandakaona nevabati veNVIDIA veAIB. Iyo fekitori inopfuura yepamusoro uye yakajairwa PCB iripo kana iwe uchida kusundira aya makadhi kana kuwedzeredza iwo. Iyo inotonhorera dhizaini inoita zvinoshamisa, ichidonhedza madhigirii akati wandei pamusoro peiyo yatove huru Tri Frozr kutonhodza kweiyo Gaming X Trio dzakasiyana uye kana iwe uchida yakanakisa Ampere kadhi, ipapo SUPRIM X haizokuregedze iwe pasi!
The post MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X & RTX 3080 SUPRIM X Graphics Makadhi Ongororo - Yekutanga Dhizaini & Zvese Zvimwe! yakatanga kutanga Wccftech.
NVIDIA Inozivisa iyo GeForce RTX 30 Series: Ampere Yekutamba, Kutanga neRTX 3080 & RTX 3090
NVIDIA Inoburitsa GeForce RTX 3090 Ti: Ampere Iyo Yese-Simba